အသငျးသဈ ရှာဖှဖေို့ အေးဂငျြ့တှကေို စလေိုကျပွီဖွဈတဲ့ အနျးဖီးလျရဲ့ ဖာရိုး – Sports A2Z
လီဗာပူးလျအသငျးရဲ့တိုကျစဈမှုး မိုဆာလားဟာ ရာသီကုနျမှာ အသငျးကိုစှနျ့ခှာတော့မှာဖွဈပွီး သူ့အတှကျ အသငျးသဈရှာပေးဖို့ နီးစပျတဲ့အသိုငျးအဝိုငျးတှနေဲ့ အေးဂငျြ့တှဆေီ မောငျးတီးထားလိုကျပွီလို့ သတငျးတှကေ ဖျောပွနပွေီး ခနျြပီယံလိဂျဝငျခှငျ့က အဆုံးအဖွတျဖွဈလာမယျလို့ ဆိုပါတယျ။
သူ့အနနေဲ့ အကောငျးဆုံးခွစှေမျးရရှိနတေဲ့ လကျရှိအရှယျကောငျးမှာ အောငျမွငျမှုတှအေသဈတှကေို ရယူလိုနတောဖွဈပွီး လီဗာပူးလျရဲ့ ဒီရာသီခွခြေျောမှုနဲ့ တှကျဆကွညျ့ရငျ စာခြုပျ ၂ နှဈသာကနျြနတေဲ့သူ့ကို ပွောငျးရှကွေ့ေးခပျမွငျ့မွငျ့နဲ့ ရောငျးထုတျဖို့ကလညျး အသငျးဘကျက အရှုံးမရှိတဲ့အနအေထားဖွဈနတေယျ။.
မို​ဆာလားက စပိနျဘီလူးကွီးတှဖွေဈတဲ့ ဘာစီလိုနာ၊ ရီးရဲလျမကျဒရဈနှဈသငျးကိုသာ မကျြစိကနြတေယျလို့ သိရပွီး လီဗာပူးလျဘကျကတညျး မိုဆာလား သို့ မာနေးကို သူတို့ရဲ့ အကောငျးဆုံးခွစှေမျးရရှိနခြေိနျမှာ ရောငျးထုတျပွီး အမွတျရှာဖို့ အစီအစဥျရှိနတေယျလို့လညျး သိရတယျ။
“ကြှနျတျော့အထငျကတော့ ရီးရဲလျနဲ့ ဘာစီလိုနာတို့ဟာ တကယျ့ထိပျသီးကလပျတှပေါ။ အပွောငျးအရှဖွေ့ဈနိုငျမဖွဈနိုငျဆိုတာတော့ ကြှနျတျော့အသငျးရဲ့ လကျထဲကို ဝကှ​ကျအပျထားပါတယျ”လို့ ပွီးခဲ့တဲ့ ဒီဇငျဘာက မိုဆာလားရဲ့ အရိပျအမွှကျဆိုခဲ့မှုဟာ လီဗာပူးလျနဲ့ မိုဆလားတို့ နှဈဦးနှဈဖကျ Win-Win Situation ကို ဖျောဆောငျလိုစိတျကိုလညျး တှရေ့တယျ။
မိုဆာလားက အသကျ ၂၈ နှဈနဲ့ အတောကျပဆုံးခွစှေမျးရှိခြိနျမှာ အရှယျမလှနျခငျ အခုထကျပိုပွီး အမွငျ့ပြံခငျြသလို လီဗာပူးလျကလညျး သူ့နရော အဆငျသငျ့ပွနျဖွညျ့ဖို့ ဝယျစရာလူစာရငျးထဲက ရှကျပုနျးသီးတှကေို ကငျးထောကျထားပွီးသား ရှိနတေယျလို့ သတငျးကဆိုတယျ။
လီဗာပူးလျအတှကျ ၁၉၈ ပှဲကစားပွီး ၁၂၃ ဂိုးသှငျးထားတဲ့ သူ့လို ကမ်ဘာ့အဆငျ့မီတိုကျစဈမှုးမြိုးကို လကျလှတျဖို့ဆိုတာ ကလော့ပျအနနေဲ့ ရူးမိုကျရာကတြယျဆိုတဲ့ ဝဖေနျမှုတှေ ရှိနပေမေယျ့ ကိုဗဈကွောငျ့ အထိနာနတေဲ့ အသငျးရဲ့စီးပှားရေးကို နာလနျထူဖို့ ရှေးခယျြစရာတခုတညျးသော နညျးလမျးလညျးဖွဈနတောပါ။
Transfermarkt ရဲ့ သတျမှတျခကျြအရ လကျရှိပေါကျစြေး ပေါငျ ၉၉ သနျးတနျကွေးရှိတဲ့ မိုဆာလားကို ဥရောပအထကျတနျးလှာအသငျးတှထေဲက ဂြူဗငျတပျဈနဲ့ ပီအကျဈဂြီတို့က ဝယျယူဖှယျ ရှိလာမှာ မဟုတျဘဲ စပိနျတခတျေကို ပွနျလညျတညျဆောကျဖို့ ရှိနတေဲ့ ဘာဆာ၊ ရီးရဲလျတို့ကသာ ညှိနှိုငျးစြေးနဲ့ ဝယျယူသှားဖှယျရှိကွောငျး သိရှိရပါတယျ။
ZAWGYI: လီဗာပူးလ်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုး မိုဆာလားဟာ ရာသီကုန်မှာ အသင်းကိုစွန့်ခွာတော့မှာဖြစ်ပြီး သူ့အတွက် အသင်းသစ်ရှာပေးဖို့ နီးစပ်တဲ့အသိုင်းအဝိုင်းတွေနဲ့ အေးဂျင့်တွေဆီ မောင်းတီးထားလိုက်ပြီလို့ သတင်းတွေက ဖော်ပြနေပြီး ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်က အဆုံးအဖြတ်ဖြစ်လာမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သူ့အနေနဲ့ အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းရရှိနေတဲ့ လက်ရှိအရွယ်ကောင်းမှာ အောင်မြင်မှုတွေအသစ်တွေကို ရယူလိုနေတာဖြစ်ပြီး လီဗာပူးလ်ရဲ့ ဒီရာသီခြေချော်မှုနဲ့ တွက်ဆကြည့်ရင် စာချုပ် ၂ နှစ်သာကျန်နေတဲ့သူ့ကို ပြောင်းရွှေ့ကြေးခပ်မြင့်မြင့်နဲ့ ရောင်းထုတ်ဖို့ကလည်း အသင်းဘက်က အရှုံးမရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်။.
မို​ဆာလားက စပိန်ဘီလူးကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ဘာစီလိုနာ၊ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်နှစ်သင်းကိုသာ မျက်စိကျနေတယ်လို့ သိရပြီး လီဗာပူးလ်ဘက်ကတည်း မိုဆာလား သို့ မာနေးကို သူတို့ရဲ့ အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းရရှိနေချိန်မှာ ရောင်းထုတ်ပြီး အမြတ်ရှာဖို့ အစီအစဉ်ရှိနေတယ်လို့လည်း သိရတယ်။
“ကျွန်တော့်အထင်ကတော့ ရီးရဲလ်နဲ့ ဘာစီလိုနာတို့ဟာ တကယ့်ထိပ်သီးကလပ်တွေပါ။ အပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆိုတာတော့ ကျွန်တော့်အသင်းရဲ့ လက်ထဲကို ဝကွ​က်အပ်ထားပါတယ်”လို့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာက မိုဆာလားရဲ့ အရိပ်အမြွက်ဆိုခဲ့မှုဟာ လီဗာပူးလ်နဲ့ မိုဆလားတို့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် Win-Win Situation ကို ဖော်ဆောင်လိုစိတ်ကိုလည်း တွေ့ရတယ်။
မိုဆာလားက အသက် ၂၈ နှစ်နဲ့ အတောက်ပဆုံးခြေစွမ်းရှိချိန်မှာ အရွယ်မလွန်ခင် အခုထက်ပိုပြီး အမြင့်ပျံချင်သလို လီဗာပူးလ်ကလည်း သူ့နေရာ အဆင်သင့်ပြန်ဖြည့်ဖို့ ဝယ်စရာလူစာရင်းထဲက ရွက်ပုန်းသီးတွေကို ကင်းထောက်ထားပြီးသား ရှိနေတယ်လို့ သတင်းကဆိုတယ်။
လီဗာပူးလ်အတွက် ၁၉၈ ပွဲကစားပြီး ၁၂၃ ဂိုးသွင်းထားတဲ့ သူ့လို ကမ္ဘာ့အဆင့်မီတိုက်စစ်မှုးမျိုးကို လက်လွှတ်ဖို့ဆိုတာ ကလော့ပ်အနေနဲ့ ရူးမိုက်ရာကျတယ်ဆိုတဲ့ ဝေဖန်မှုတွေ ရှိနေပေမယ့် ကိုဗစ်ကြောင့် အထိနာနေတဲ့ အသင်းရဲ့စီးပွားရေးကို နာလန်ထူဖို့ ရွေးချယ်စရာတခုတည်းသော နည်းလမ်းလည်းဖြစ်နေတာပါ။
Transfermarkt ရဲ့ သတ်မှတ်ချက်အရ လက်ရှိပေါက်ဈေး ပေါင် ၉၉ သန်းတန်ကြေးရှိတဲ့ မိုဆာလားကို ဥရောပအထက်တန်းလွှာအသင်းတွေထဲက ဂျူဗင်တပ်စ်နဲ့ ပီအက်စ်ဂျီတို့က ဝယ်ယူဖွယ် ရှိလာမှာ မဟုတ်ဘဲ စပိန်တခေတ်ကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ ရှိနေတဲ့ ဘာဆာ၊ ရီးရဲလ်တို့ကသာ ညှိနှိုင်းဈေးနဲ့ ဝယ်ယူသွားဖွယ်ရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။